ဒီင်္ပြဿနာလေး ဖြေရှင်းပေးပါ ။ — MYSTERY ZILLION
ဒီင်္ပြဿနာလေး ဖြေရှင်းပေးပါ ။
ကျွန်တော်ပြဿနာလေးကိုပြောပြပါ့မယ် ။ အခု mz မှာဆို၇င်ဗျာ ၊ စစဦးဆံ ုးအသင်း၀င်ဆိုရင် မွေးကင်းစကလေး ၊ ပို ့စ်နဲနဲရလာရင် ကလေး.၊ ထပ်များလာရင် အရွယ်ရောက် စ စသည်ဖြင် ့ရှိပါတယ် ။ ပြီးတော့အက်မင်ဆိုရင်လဲ အက်မင် ၊ မော်ဒရေတာဆိုရင်လဲ မော ့ပေါ့ ။ အသီးသီးရာထူးကိုယ်စီနဲ ့ရှိပါတယ် ။
အဲ...ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေအကူအညီနဲ့ဖိုရမ်တခု ကလိကြည် ့ပါတယ် ။ SMF ပါ ။ host ကတော့free မှာပါပဲ ။ အဲဒီမှာလုပ်ပြီးတော့members group ခွဲတဲ ့နေရာမှာ....တိုင်ပတ်နေတယ်ခင်ဗျ ။ ကျွန်တော် admin တွေကို forum administrator လို ့ပေးပြီး ၊ စစ၀င်ချင်းအသင်းသားကို အသစ်ကလေးပေါ့ ။ အဲဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းသားတွေမှာ မထူးခြားဘူးခင်ဗျာ ။ အက်မင်တွေကတော့ဘွဲ ့နှစ်ခုရကုန်ပါတယ် ။
အက်မင်ဆိုတဲ ့အမည်အပြင် အောက်ကထပ်ပြီး....အသစ်ကလေး ဆိုတာကြိးပါ ပေါ်လာတယ်ဗျာ :2:
ကျွန်တော်လဲ...အမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီး ကလိကြည် ့ပါတယ်...ရဘူးဗျာ......အဲတာလေး သိချင်ပါတယ်..သိသူများဖြေပေးကြပါခင်ဗျ ။ ကျွန်တော်တွေ ့နေတာကတော့အက်မင် acc က regular group မှာရော ၊ Post count based groups မှာပါ သွားပြီး နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗျာ ။ ဒါကြောင် ့နှစ်ခုပေါ်နေတယ်လို ့ထင်ပါတယ် ။ ဥပမာ ။ ။ scale ဆိုတဲ့admin acc ဟာ..... အသစ်ကလေးဆိုတဲ့Post count based groups မှာလဲသွားရှိနေပါတယ်......လုပ်ကြပါအံ ုးဗျာ...အကြံလေးဘာလေးပေါ့
အဲတာ လေး က သိသလိုလို နဲ ့ကျွန်တော်လဲ လုပ်ကြည့်တော့ကိုscale လို
Black Market in this post...!!
hide post group titles for grouped members? Enabling this will not displayamember's post group title on the message view if they are assigned toanon-post based group.
အဲတာ လေး ကို အမှန်ခြစ် ထဲ ့လိုက်ပါ.. ကိုစကေး..
ကိုမင်းလွင် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရပြန်ပြီလားဗျ ဟီးဟီ :d
ကို စကေးက အပေးနိုင်ဘူးတဲ ့..
http://blackeagles.22web.net ပါခင်ဗျ ......အထက်ကပြဿနာပြေလည်ပြီးတကာလ နောက်ထပ် ပြဿနာ ပေါ်လာပြန်တာက ဒီလိုပါခင်ဗျာ ....... ဖိုရမ်ကို၀င်ဖို့address ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ဖိုရမ်ပေါ်မလာပဲ....ဒီစာတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ ။။
အဲဒါဘာဖြစ်တာပါလဲခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော်ဘာမှ အမှားအယွင်းလဲမလုပ်မိပါ ။ အဲ.....admin acc ရဲ့password ကိုတော့ချိန်းလိုက်မိပါတယ် ။ ဒါလဲဆိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးထင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ယူရမယ်ဆိုတာ သိသူများ သင်ပြကြပါအုံးခင်ဗျ ...
အခု ဂွတ်သွားဘီ ထင်တယ်..
ကိုscale ဖို၇မ် က မိုးကြိုး တွေ တအားပစ်တယ်နော်..
Browser နဲ့banner နဲ ့က တစ်ခု နဲ ့တစ်ခု မညီ ဘူးဗျ..:39: